Landa i-British Aircraft Corporation BAC 1-11 FS2004 - Rikoooo
Usayizi 28.4 MB
Play 14 446
Bac XLUMX indiza yezentengiso. Isimangaliso sekhwalithi. Iminyango yangaphambili neyangemuva iyavuleka. ukukhethwa kokubuyiselwa okuningi. Imodeli yendiza ephelele. Ikhabethe elibonakalayo eliseduze kwangempela. Imisindo yobuhle ye "reverse". Qedela uhlu lokuhlola ngaphambi kokusuka kanye nezinqubo zokuqapha sendiza. Indiza okungafanele uyiphuthelwe i-FS111! Hhayi iCompatibe FSX.
I-British Aircraft Corporation 1-11 (noma i-BAC 1-11) yayiyindlela yokusabela kwezindiza yaseBrithani, ububanzi obufushane 1960 no-1970. Eyakhelwe yi-Hunting Aircraft (ngaphakathi), yakhiwa futhi yaveliswa yiBrithani Aircraft Corporation ngemuva kokuba abakhiqizi baseBrithani behlanganiswe ku-1960.
I-BAC 1-11 yenzelwe ukufaka esikhundleni seVickers Viscount. Wayeyi-jet yesibili ehamba kancane, owokuqala waba yi-Sud Aviation Caravelle. Ngenxa yokungena kwayo ekuhambeni kwesikhathi, inzuzo ye-BAC 1-11 yezinjini eziphumelelayo kanye nokuhlangenwe nakho okukhulu kunama-reactors. Lokhu kwamenza wathandwa kakhulu lapho eqaliswa, isigamu sokuthengiswa kwayo e-United States. I-BAC 1-11 yayiyizindiza zeBrithani eziphumelele kakhulu, futhi zagcinwa enkonzweni kuze kube yi-1990s, lapho isuswe ngenxa yemingcele yomsindo.